Ònye Ka Baịbụl Kpọrọ Onye Na-emegide Kraịst?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Nahuatl (Central) Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Umbundu Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
A kpọrọ otu fim na-atụ ụjọ e mere na nso nso a Antichrist nke pụtara Onye Na-emegide Kraịst.
Okwu Bekee bụ́ Antichrist, nke pụtara Onye Na-emegide Kraịst, dị n’aha otu egwú otu òtù egwú a ma ama kụrụ.
Ihe otu nwoke gụrụ oké akwụkwọ kpọrọ otu akwụkwọ o dere bụ The Antichrist, nke pụtara Onye Ahụ Na-emegide Kraịst. Aha nwoke a bụ Friedrich Nietzsche. O dere ọtụtụ akwụkwọ n’agbata afọ 1872 na afọ 1888.
N’oge ochie, ndị eze na-akpọkarị ndị iro ha ndị na-emegide Kraịst.
Otu onye Jamanị aha ya bụ Matịn Luta, bụ́ onyeisi ndị malitere ịgba ihe ndị Katọlik na-akụzi ụkwụ, kpọrọ ndị poopu Katọlik ndị na-emegide Kraịst.
EBE ọ bụ na e nweela ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-akpọ “onye na-emegide Kraịst,” anyị kwesịrị ịchọsi ike ịma onye bụ́ onye na-emegide Kraịst nakwa ma ò nwere uru ịmata ya ga-abara anyị. Na Baịbụl, e nwere ebe abụọ e dere “onye na-emegide Kraịst,” nwee ebe abụọ e dere “onye ahụ na-emegide Kraịst,” nweekwa otu ebe e dere “ndị na-emegide Kraịst.” N’ihi ya, e nweghị ebe ọzọ ka mma anyị kwesịrị ibido chọwa ihe “onye na-emegide Kraịst” pụtara karịa na Baịbụl.
OTÚ E SI MATA ONYE NA-EMEGIDE KRAỊST
N’ime ndị niile so dee Baịbụl, ọ bụ naanị Jọn onyeozi dere okwu bụ́ “onye na-emegide Kraịst.” Olee otú o si kọwaa ihe ọ pụtara? O kwuru na 1 Jọn 2:18, 19, 22, sị: “Ụmụntakịrị, ọ bụ oge awa ikpeazụ, dịkwa nnọọ ka unu nụrụ na onye na-emegide Kraịst na-abịa, ọbụna ugbu a, e nwewo ọtụtụ ndị na-emegide Kraịst; nke bụ́ ihe anyị ji mara na ọ bụ oge awa ikpeazụ. Ha si n’ebe anyị nọ pụọ, ma anyị na ha abụghị otu . . . Ònye bụ onye ụgha ma ọ bụghị onye na-asị na Jizọs abụghị Kraịst? Ọ bụ onye a bụ onye na-emegide Kraịst, ya bụ, onye na-agọnahụ Nna ahụ na Ọkpara ya.”
Jọn onyeozi ghọtara na onye na-emegide Kraịst abụghị otu onye, kama, ọ bụ ndị niile kpachaara anya na-akụziri ọhaneze ihe na-abụghị eziokwu gbasara Jizọs Kraịst, na-ekwukwa na Jizọs kwuru ihe ndị ọ na-ekwughị
Gịnị ka anyị na-amụta n’ihe a Jọn kwuru? Jọn kwuru na e nwere “ọtụtụ ndị na-emegide Kraịst.” Ọ pụtara na ọ bụghị otu onye na-emegide Kraịst, kama, ọ bụ ọtụtụ ndị. Òtù ma ọ bụ ndị a na-emegide Kraịst na-ekwu ihe na-abụghị eziokwu gbasara Jizọs. Ha na-asị na Jizọs abụghị Kraịst, ma ọ bụ Mesaya ahụ. Ha na-agbalịkwa ime ka ndị mmadụ ghara ịmata na Chineke dị iche, Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst adịrị iche. Ndị a na-emegide Kraịst na-ekwu na ha bụ Kraịst ma ọ bụkwanụ na ha na-anọchite anya Kraịst. Ma, ebe “ha si n’ebe anyị nọ pụọ,” ha anaghịzi ekwu ihe Baịbụl kwuru. Ihe ọzọ bụkwa na ndị a na-emegide Kraịst nọ ya mgbe Jọn na-ede akwụkwọ ozi a ‘n’oge awa ikpeazụ.’ Oge ikpeazụ a ga-abụ obere oge tupu ndịozi anwụchaa.
Olee ihe ọzọ Jọn kwuru gbasara onye na-emegide Kraịst? Jọn gwara anyị ka anyị kpachara anya maka ndị amụma ụgha. Ọ sịrị: “Okwu ọ bụla nke si n’aka mmụọ, nke na-ekwupụta na Jizọs Kraịst bịara n’anụ ahụ́, si n’aka Chineke, ma okwu ọ bụla nke si n’aka mmụọ, nke na-adịghị ekwupụta Jizọs, esighị n’aka Chineke. Ọ bụ ya bụ okwu si n’aka mmụọ nke onye ahụ na-emegide Kraịst, onye unu nụrụ na ọ na-abịa, ugbu a, ọ nọrọlarị n’ụwa.” (1 Jọn 4:2, 3) N’akwụkwọ ozi nke abụọ Jọn dere, o mesiri ihe a ọ na-ekwu ike. Ọ sịrị: “Ọtụtụ ndị nduhie abanyewo n’ụwa, bụ́ ndị na-adịghị ekwupụta na Jizọs Kraịst bịara n’anụ ahụ́. Nke a bụ onye nduhie ahụ na onye ahụ na-emegide Kraịst.” (2 Jọn 7) O doro anya na Jọn ghọtara na onye na-emegide Kraịst abụghị otu onye, kama, ọ bụ ndị niile kpachaara anya na-akụziri ọhaneze ihe na-abụghị eziokwu gbasara Jizọs Kraịst, na-ekwukwa na Jizọs kwuru ihe ndị ọ na-ekwughị.
“NDỊ AMỤMA ỤGHA” NA “ONYE AHỤ NA-EMEBI IWU”
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpachara anya n’ihi na ndị amụma ụgha ga-abịakwute ha “n’oyiyi atụrụ, ma n’ime ha, ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji”
Ọtụtụ afọ tupu Jọn edee gbasara ndị okpukpe a na-eduhie ndị mmadụ, Jizọs Kraịst gwara ndị na-eso ụzọ ya sị: “Lezienụ anya maka ndị amụma ụgha ndị na-abịakwute unu n’oyiyi atụrụ, ma n’ime ha, ha bụ anụ ọhịa wolf agụụ ji.” (Matiu 7:15) Pọl onyeozi gwakwara Ndị Kraịst nọ na Tesalonaịka sị: ‘Unu ekwela ka onye ọ bụla rafuo unu n’ụzọ ọ bụla, n’ihi na ụbọchị Jehova agaghị abịa ma ọ bụrụ na e bughị ụzọ nwee ndapụ n’ezi ofufe, e kpugheekwa onye ahụ na-emebi iwu, nke bụ́ nwa mbibi.’—2 Ndị Tesalonaịka 2:3.
Ihe ndị a anyị lebarala anya gosiri na ndị amụma ụgha na ndị na-ezi ozizi ụgha anọrọla kemgbe oge ndịozi Jizọs, ha na-agbalịkwa iduhie ndị nọ n’ọgbakọ Ndị Kraịst. Ndị niile na-akụzi ihe na-abụghị eziokwu gbasara Jizọs na ndị na-akụzi ihe ọ na-akụzighị socha na ndị Jọn onyeozi kpọrọ “onye na-emegide Kraịst.” Pọl kpọkwara ha “nwa mbibi.” Ihe a Pọl kpọrọ ha mere ka anyị mata otú Jehova si ele ha anya.
KPACHARA ANYA KA ONYE NA-EMEGIDE KRAỊST GHARA IDUHIE GỊ
Oleekwanụ gbasara oge anyị a? Ndị mmadụ na òtù dị iche iche bụ́ ndị na-emegide Kraịst ka na-emegidekwa ya ma na-ekwu na ihe ndị ọ kụziri abụghị eziokwu. Ha na-akpachara anya na-akụzi ihe na-abụghị eziokwu ma na-eduhie ndị mmadụ ka ha ghara ịma nke bụ́ eziokwu gbasara Jehova Chineke na Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst. Anyị kwesịrị ịkpachara anya ka ha ghara iji ihe ndị a ha na-akụzi duhie anyị. Ka anyị lebagodi anya n’ihe abụọ ha na-akụzi.
Kemgbe ọtụtụ afọ, chọọchị dị iche iche na-akụzi ozizi Atọ n’Ime Otu. Ha na-ekwu na Chineke na Ọkpara ya bụ otu onye. Onye na-emegide Kraịst na-eme ka ndị mmadụ ghara ịma nke bụ́ eziokwu gbasara onye Jehova Chineke na Jizọs Kraịst bụ. Ihe a ha na-eme na-emezi ka ọ na-esiri ndị mmadụ ike iṅomi Jizọs na ịbịaru Chineke nso bụkwanụ ihe Baịbụl gbara ha ume ka ha mee.—1 Ndị Kọrịnt 11:1; Jems 4:8.
O nwekwara ihe ọzọ chọọchị dị iche iche na-eme ka ndị mmadụ ghara ịma nke bụ́ eziokwu. Ha na-agwa ndị òtù ha ka ha na-agụ Baịbụl ndị e wepụrụ aha Chineke, bụ́ Jehova, na ha. Ma mgbe e dere Baịbụl, aha ahụ bụ́ Jehova pụtara na ya ihe dị ka ugboro puku asaa. Ihe a ha mere emeela ka o sikwuoro ndị mmadụ ike ịmata onye ezi Chineke bụ.
Ma, ịmata na aha Chineke bụ Jehova enyerela ọtụtụ ndị chọrọ ife Chineke aka ịbịaru ya nso. Ụdị ihe a mere otu nwoke aha ya bụ Richard. O kwuru ihe mere mgbe ya na Ndịàmà Jehova abụọ kparịtachara ụka. Ọ sịrị: “Ha ji Baịbụl gosi m na aha Chineke bụ Jehova. Obi tọrọ m ụtọ ịmata na Chineke nwere aha. Anụtụbeghị m ya mbụ.” Bido mgbe ahụ gawa, nwoke a kwụsịrị ndụ ọjọọ ọ na-ebi, kpawa àgwà ọma n’ihi na ọ chọrọ ime ihe ndị ọ na-amụta na Baịbụl, chọọkwa ime Jehova obi ụtọ. O kwukwara, sị: “Ịmata ezigbo aha Chineke emeela ka mụ na Chineke dịkwuo ná mma.”
Kemgbe ọtụtụ narị afọ, onye ahụ na-emegide Kraịst emeela ka ọtụtụ ndị ghara ịma nke bụ́ eziokwu. Ma, Baịbụl anyị na-amụ emeela ka anyị mata onye ahụ na-emegide Kraịst. O meekwala ka anyị ghara iso ná ndị o ji ụgha na aghụghọ na-eduhie.—Jọn 17:17.
Otú Baịbụl si zaa ajụjụ a nwere ike ịtụ gị n’anya. Chọpụta ihe mere o ji dị mkpa ịma onye na-achị ụwa a nakwa otú ihe ga-adị n’ọdịnihu.